Kedu ka OpenSea si agba mbọ ịlụ ọgụ NFT plagiarism - CoinWorldMap
Kedu ka OpenSea si agba mbọ ịlụ ọgụ NFT plagiarism
Mee 12, 2022 Ethereum, Nft
Ebe a na-ere ahịa na-abụghị fungible token (NFT) OpenSea na-agbalị ịlụso plagiarism ọgụ n'elu ikpo okwu ya. Ụzọ ọhụrụ "ụzọ abụọ" ga-achọ ikpochapụ na iwepụ ezigbo NFT, ebe mgbanwe na akara ngosi akara anụnụ anụnụ ga-achọ ịkwalite ntụkwasị obi ndị ahịa.
Dị ka akwụkwọ akụkọ blọọgụ si kwuo, usoro mgbochi plagiarism ga-adabere na nchọpụta akpaka nke ihe a na-akpọ mbipụta, nke ndị na-enyocha mmadụ ga-akwado, iji mee ka usoro nchọpụta algorithmic na-achịkwa.
Dị ka Verge si kwuo, n'afọ gara aga, a ghọgburu ndị na-anakọta NFT na-eji ikpo okwu na-azụta ihe oyiyi dị elu nke nchịkọta ndị a ma ama. BAYC. A na-amanyekwa ụlọ ahịa kacha ibu, NFT, iwepụ ọrụ mkpụrụ ego ya site na ịkwụ ụgwọ echere ka ọ nwebatara nnomi nke mkpokọta dị ugbu a.
N'oge ahụ, 80% nke NFT ewepụrụ n'elu ikpo okwu bụ nke a na-egwupụta site na ọrụ mint ume ume ya, bụ nke kwụsịrị ịkwụ ụgwọ gas, na-edebe akụ dijitalụ na-anọghị n'ịntanetị ruo mgbe ịzụrụ NFT mbụ.
NFT ndị e depụtaghachiri bụ naanị ijide ego na ebili mmiri nke mkpokọta ama ama. Onye nnomi a na-pịa aka nri n'ụzọ ziri ezi, chekwaa faịlụ ma bipụta JPEG, nke a na-ere ya n'ụdị nke ezigbo. Nft.
Sistemụ mgbochi plagiarism nke OpenSea ga-enyocha ọtụtụ mkpokọta ikpo okwu maka onyonyo gbadoro ụkwụ na agbagharị agbagharị, yana mmetọ ndị ọzọ na-akọwapụtabeghị ugbu a. Enweghị nkọwa ebe a nwere ike ịbụ ụzọ iji zoo ozi n'aka ndị scammers, mana ọ nwekwara ike na-egosi ọdịdị nke usoro ọhụrụ ahụ.
Nke a bụ ebe ndị nchọpụta mmadụ na-abata, bụ ndị ga-enyocha ihe oyiyi nke usoro nchọpụta ahụ gosipụtara ma nyere aka zụọ usoro ahụ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
"Site na usoro a, ihe mgbaru ọsọ anyị ogologo oge dị okpukpu abụọ: nke mbụ, site n'enyemaka nke obodo anyị, iji kpochapụ ihe niile dị na OpenSea, na nke abụọ, iji nyere aka gbochie mbipụta ọhụrụ ịpụta," akwụkwọ akụkọ ahụ na-agụ. "Anyị amalitela usoro nke ihichapụ mkpokọta ndị egosipụtara, na n'ime izu ole na ole na-abịa, anyị ga na-agbasa usoro nhichapụ ahụ n'usoro."
Ọ na-arụ ọrụ maka Twitter, gịnị kpatara na ọ bụghị OpenSea
OpenSea na-emekwa mgbanwe na otu esi enyocha akaụntụ. Na mbụ, a ga-akpọ akaụntụ nwere ngwugwu NFT ruru 100 ETH ($ 196) ma ọ bụ karịa maka nkwenye. OpenSea kwuru na ọ na-ezube ịnye ndị na-arụ ọrụ na Twitter na Discord ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ.
"Nke a bụ naanị mmalite - anyị na-achọ ọdịnihu ebe enwere ike ịnwapụta akaụntụ onye okike ọ bụla, na-egbochi ndị aghụghọ na sistemụ ahụ," akwụkwọ akụkọ ahụ na-agụ.
Akara nlele na-acha anụnụ anụnụ n'ebe niile ga-egosi akaụntụ na mkpokọta ekwenyesiri ike.
A ga-ejikwa ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ akara mkpokọta ma ọ bụrụ na ha so na akaụntụ ekwenyesiri ike ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ọtụtụ hype na nnukwu ahịa ahịa gburugburu ha. Dịka ọmụmaatụ, nchịkọta ọhụrụ nke NFT depụtara maka ọrịre site na akaụntụ BAYC kwadoro ga-eji akara na-acha anụnụ anụnụ mee ka ndị nwere ike ịzụ ahịa mara na ọ bụ iwu kwadoro.
OpenSea kwuru na akaụntụ na nnakọta niile “enyochalarị” agaghị atụfu akara na-acha anụnụ anụnụ, a ga-aza arịrịọ ọhụrụ n'ime ụbọchị asaa.
"Anyị na-ele mmemme na ngwaahịa ndị a anya dị ka mgbama nke OpenSea iji nyere aka chebe ndị okike na ndị na-anakọta ma hụ na obodo anyị nwere ike iji obi ike na-agagharị na ụwa NFT ... ọnụ, anyị kwenyere na mgbanwe ndị a n'otu oge na-abawanye ntụkwasị obi na gburugburu ebe obibi NFT site n'ịbawanye ọkwa nke NFT. ezigbo ọdịnaya na iwepu ọrụ ndị a na-edegharị aha, "OpenSea kwuru.
N'ezie Meghee bụ naanị ijide akụkụ ndị ọzọ nke akụ na ụba nka dijitalụ. N'August gara aga, ikpo okwu Pọtụfoliyo nka n'ịntanetị DevianArt kwalitere sistemu njirimara ọgụgụ isi ya (AI) iji chọta nka ezuru ezuru n'ahịa dị ka OpenSea.
DeviantArt Protect na-enyocha nka niile ebugoro wee jiri ya tụnyere "mmemme ọha na eze blockchain" dịka NFT dabere na Ethereum iji chọpụta nka ezuru.
NFT egwuregwu: Ntuziaka onye ọchụnta ego
Germany na-ekpebi ụtụ isi crypto